Imikhiqizo yokuvikela umlilo
Ukumboza okungaphakathi okungangenisi mlilo kwesakhiwo sensimbi
Ukumboza kwangaphandle okungangenamlilo kwesakhiwo sensimbi
Non enwebekayo fire cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi enamathela for ongaphandle steel isakhiwo
Izingilazi ezingabonakali zomlilo ezinciphisa umlilo zezakhiwo zensimbi zasendlini
Ikhebula lomlilo elidonsa umlilo
Isikhwama esivimba umlilo
Iteyipu yokulinda ngomlilo
Izinto eziguquguqukayo zokufaka izinto eziphilayo
Okungajwayelekile okokufaka okokufaka umlilo
Indwangu yokulinda umlilo
Indwangu engabonakali yomlilo
Intuthu yekhethini lendwangu
I-sealant engangenisi mlilo
I-sealant evimba umlilo
Isicelo: Njenge-Aerospace, i-petroleum, imboni yamakhemikhali, amandla kagesi, ukusansimbi, ukuvikela izwe, umkhakha wezindwangu nezinye izakhiwo ezingaphandle kuthwala ukuvikelwa komlilo kwezinsimbi ezisindayo, futhi kufanelekile ikakhulukazi kumaphrojekthi wesakhiwo sensimbi anengozi yomlilo amakhemikhali e-hydrocarbon (njengamafutha, i-solvent, njll.), njengobunjiniyela be-petrochemical, igalaji, ipulatifomu yokumba uwoyela, ifreyimu yokusekela indawo yokugcina uwoyela.
Ukwakhiwa okulula: ukufafaza, ukumboza i-roller nokuxubha kungasetshenziswa. Ukunamathela okuqinile: inokunamathela okuqinile kuhlobo lwe-epoxy, uhlobo lwe-alkyd nohlobo lwe-phenolic antirust primer, oluqinile futhi oluqinile, olusetshenziswa kabanzi, ngekhwalithi ephezulu nentengo ephansi. I-Cdgc-isakhiwo sangaphakathi sensimbi esincanyana esinezinsimbi zomlilo esivikela umlilo silungele ukuvikelwa komlilo kwamalungu athwala umthwalo wezinhlelo ezahlukahlukene zensimbi ezinomkhawulo wokumelana nomlilo omkhulu kune-2 h.
Lo mkhiqizo uhlobo oluthile olumnyama olunzulu, olungenayo i-solvent (olungenakunambitheka), ukuvikelwa kwemvelo, okungenabungozi emzimbeni womuntu, ukubukeka okungajwayelekile kwe-mucilage. Isetshenziswa kabanzi kwezokuvikela nakowoyela, embonini yamakhemikhali, egalaji likaphethiloli, esiteshini esincane, endaweni yokugcina izinto enobungozi nakwezinye izindawo eziyingozi zokuqhuma, njengethubhu yokubonisa noma abasebenzi bezintambo
Isetshenziselwa ukuhlukaniswa nokubekwa uphawu kokuqhuma. Ingasetshenziselwa ukugoqa ucingo, ukuhlanganisa, ikhebula, ipayipi, ucingo lwensimbi, njll ukuvimbela umlilo.
Izinto eziguquguqukayo zokuxhuma izinto ze-intumescent sealant fireproof
Ubumba lomlilo lubizwa nangokuthi izinto zokufaka umlilo ezingangeni umlilo, ezingahlukaniswa zibe yisikhwama nebhokisi. Izinto ezisetshenziswayo ikakhulukazi zisetshenziselwa ukuxhuma izimbobo zezintambo nezintambo ukuvikela umlilo wezintambo nezintambo ukuthi ungasabalali kusuka emigodini kuya emakamelweni asondele futhi kunciphise ukulahleka komlilo. Inemisebenzi yokuvikela intuthu, ukuvimbela umlilo nokuvikela uthuli. Ngakho-ke, impahla yokuxhuma isetshenziswa kakhulu ezitshalweni zamandla, amabhizinisi ezimboni nezimayini, izakhiwo eziphakeme kakhulu, amandla okwakha umkhumbi, okuthunyelwe nokuxhumana ngocingo, isiteshi esincane, insimbi kanye nolunye uhlelo lobunjiniyela.
Okungajwayelekile okokufaka okokushisa umlilo, okwaziwa nangokuthi ukusethwa okusheshayo kwempahla engacimi umlilo.
Imvamisa ibizwa ngokuthi isethaphu esheshayo impahla engacishi umlilo
Usebenzisa i-emulsion esekwe emanzini njengezinto eziyisisekelo, uxhuma indawo yokufaka isicelo: ukufaka ijoyini lokufaka uphawu lohlaka lomnyango ngezidingo eziqinile zokuvimbela intuthu. Uhlobo lokukhulisa uphawu olungenamlilo, ukuze uthole umphumela odingekayo wokuvikela umlilo, sebenzisa ubukhulu obunqunyiwe ukunquma ukuthi i-sealant inokuxhumana nobuso bensimbi yepayipi ukuthola amandla amakhulu okunamathela. Ukuze uthole i-mastic eyeqile, ngaphambi kokuba iqine, ingasuswa ngamanzi. I-sealant evimba umlilo, hlanza ukuvulwa, bese ulungiselela ukufaka indawo ehlangene ye-FS-I kufanele isuswe imfucumfucu ehlakazekile, uthuli, amabala kawoyela, isithwathwa, i-wax, njll., Futhi ihlale yomile. Ingxenye eyodwa, esekwe emanzini, i-acrylic acid-proof sealant is a high-performance and elastic antifungal sealant. Ingamelana nokushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu. Ingamelana nokushisa okuphezulu, ukushisa okuphansi, i-ultra-high, medium, ingcindezi ephansi nengcindezi engemihle, kanye nejubane elikhulu. Ingxenye eyodwa ye-sealant, enganamatheli, ebomvu ebomvu, enamathisela i-sealant emnyama, ayiqinisi ekamelweni lokushisa futhi igcizelela ekushiseni okuphezulu kwe-Flame retardant sealant uhlobo olusha lwento eyodwa yomlilo. Eminyakeni yamuva nje, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zentuthuko yokwakha ubuchwepheshe bokonga amandla, kuhlanganiswe nezinzuzo zemikhiqizo yasekhaya neyangaphandle, kwenziwa ngezinto eziphezulu zamangqamuzana.
Lo mkhiqizo ulungele ukuvimbela umlilo kwezintambo zamandla nezokuxhumana, okubaluleke kakhulu ekuqedeni izingozi ezifihliwe, ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile kwezintambo zokudlulisa amandla nokusabalalisa kanye nolayini bezokuxhumana. Iteyipu yokuzibamba enamathela kuyo eyenziwe yinkampani yethu uhlobo olusha lomkhiqizo ocisha umlilo wezintambo zamandla nezokuxhumana. It has izinzuzo ukusebenza umlilo-cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi kanye engangenwa umlilo, self-ingcina nokusebenza. Ayisebenzisi ubuthi, ayinambitheki futhi ayinangcoliso, futhi ayithinti umthamo wamanje wekhebula ekusebenzeni kwekhebula. Ngoba ithephu engazisebenzisi yokunamathisela umlilo isetshenziselwa ukugoqa ebusweni bekhebula emgodleni, lapho umlilo uvela, ingashesha yenze ungqimba lwekhabhoni olunokumelana nomoya-mpilo kanye nokufakwa kokushisa, okuvimba kahle ikhebula ekushiseni.
Isikhwama se-Db-a3-cd01 esicisha umlilo uhlobo olusha lobufakazi obusekela umlilo obusekelwa yinkampani yakwa-Weicheng ngokuya ngezinga elisha likazwelonke le-gb23864-2009 (impahla yokufaka umlilo). Ukuma kwesikhwama se-db-a3-cd01 esikhipha umlilo kufana nomcamelo omncane, ungqimba lwangaphandle lwenziwe ngendwangu yengilazi ephathwayo, kanti ingaphakathi ligcwele inhlanganisela yezinto ezingavuthwa ezingaphili nezengezo ezikhethekile. Umkhiqizo awunabo ubuthi, awunambitheki, awugqiki, awunamanzi, awumelana no-oyela, uyamelana ne-Hygrothermal, umelana nomjikelezo weqhwa futhi unciphise izici ezinhle zokunweba. Ingahlukaniswa iphinde isetshenziswe ngokuthanda kwayo. Kungenziwa ngezimo ezahlukahlukene zohlelo lokuvikela umlilo nolwelwesi olungacimi umlilo ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi, futhi lungasetshenziselwa ukuvala izimbobo ezidinga ukwelashwa okungenawo umlilo. Lapho uhlangabezana nomlilo, izinto ezisephakeji elicisha umlilo ziyashiswa futhi zandiswe zenze ibhulokhi lezinyosi, kwakheke ungqimba oluqinile lokuvala ukufezekisa ukuvimbela umlilo nokushisa ukushisa, futhi ulawule ngempumelelo umlilo ngaphakathi kobubanzi bendawo. Lapho ukushuba kokufaka kufinyelela ku-240mm, umkhawulo wokumelana nomlilo ungafinyelela ngaphezu kwe-180min.
Ibhodi lokumboza elingenamlilo (imodeli: dc-a2-cd08)
Uhlelo lwe-dc-a2-cd08 lokufaka uphawu lokushisa umlilo luhlobo olusha lwezinto ezingangeni umlilo ezenziwe yinkampani yethu, engenaphunga, engena-halogen, enokumelana kahle kwesimo sezulu, ukuqina kwentuthu nokuqina komoya. It is kabanzi emandleni enuzi, amandla ezokuxhumana, yokusansimbi kanye petrochemical umkhakha. Ngoba ukwakhiwa kulula, ngakho-ke kungonga abasebenzi futhi kunciphise izindleko. Ilungele ikakhulukazi ukushintshwa kwekhebula njalo Izingxenye ezibalulekile zomzimba.
I-CDDT-AA yohlobo lwe-cable retardant enamathela uhlobo olusha lwengubo ecekela umlilo eyenziwe yinkampani yethu ngokuya ngamazinga we-GA181-1998 Ministry of security of public. Umkhiqizo wenziwe ngazo zonke izinhlobo zokuvimbela umlilo, i-plasticizer njalonjalo. Ikhebula lamanzi nogesi elithuthukile ezweni.Lo mkhiqizo ungakhiqiza ukufakwa kwesiponji okufana nesicinene lapho kushiswa. Ingavimbela ngempumelelo futhi ivimbele ukusabalala nokusabalala kwelangabi, futhi ivikele izintambo nezintambo. Izinzuzo zayo eziyinhloko yilezi: ukuvikelwa kwemvelo, akukho ukungcola, okungekho ubuthi futhi akunambitheki, akukho usongo empilweni yabasebenzi bokumboza. Lo mkhiqizo unezici zokunamathisela okuncane, ukunamathela okuqinile, ukuguquguquka okuhle, nokufakwa kahle nemisebenzi yokulwa nokugqwala.
Ukumboza okungangenisi mlilo kwesakhiwo sensimbi kungumkhiqizo omusha wokuvikela imvelo osezingeni eliphakeme owenziwe yinkampani yethu ngokwezinga likazwelonke le-gb14907-2018. Lapho umkhiqizo ushiswa, ingxenye ekhihliza amagwebu kwifilimu izobola lapho ifudunyezwa yenze ukufakwa okunamandla nokufana kokushisa nokuqina komoya we-oxygen. Ukuze uvikele isakhiwo sensimbi.
I-Dc-a1-cd04 isikhubekiso somlilo esingajwayelekile siphinde sibizwe ngokuthi isithiyo somlilo noma ipuleti elingashisi elicisha umlilo. Leli bhodi lenziwe ngezinto ezahlukahlukene ezingashisi ngokuthunyelwa kwesayensi nangokucindezela. Inokusebenza okuhle okubuyisa ilangabi, isikhathi sokungashisi esingaphezu kwamahora ama-3 uma kwenzeka umlilo, amandla aphezulu emishini, ukuqhuma okungekho, ukumelana kwamanzi no-oyili, ukumelana nokuqina kwamakhemikhali amakhemikhali, okungewona ubuthi nezinye izici. Esivivinyweni somlilo se-dc-a1-cd04 isikhubekiso somlilo esingajwayelekile, izinga lokushisa okungcono kakhulu kwelangabi lingu-1000 ℃ ngaphandle kokuguqulwa, zonke izinkomba zihlangabezana nezidingo ze-gb23864-2009, futhi ukusebenza komlilo kufinyelela kuzinga le- (incombustibility) elicaciswe ku-GB / t2408 -2008. I-Dc-a1-cd04 isithiyo somlilo esingajwayelekile sisebenza kakhulu ekuvikeleni umlilo nasekuhlukaniseni umlilo kwezintambo zamazinga ahlukahlukene wamandla lapho kubekwa kubakaki noma ebhulohweni Kusetshenziswa ekwakheni ikhebula lezitshalo zamandla, amabhizinisi amakhemikhali, amabhizinisi okuncibilikisa insimbi nensimbi , izimayini nezinye izindawo eziqinisa ikhebula eChina.
I-Weicheng Fire Prevention Technology Group Co, Ltd.yinkampani yamakhemikhali ebandakanyeka ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemishini yokulwa nomlilo nezinto zokubuyisela umlilo ......
I-Weicheng Fire Prevention Technology Group Co, Ltd.